China PU mpamokatra kodiarana sy mpamatsy | Ruiyi
Ny kodiarana PU dia safidy malaza amin'ny fampiharana indostrialy noho ny fahanginany miasa raha ampitahaina amin'ny kodiarana mafy kokoa toy ny vy na vy vy. Ireo kodiarana PU ho mpitroka hatairana ary manampy amin'ny fandosirana. Izy io koa dia mifoka vongan-tany avy amin'ny tany tsy mitovy. Ny fampiasana kodiarana PU fa tsy vy dia mampihena be ny haavon'ny tabataba mba hiarovana ny fihainoan'ny mpiasa anao.
Kodiarana PU dia safidy malaza amin'ny rindranasa indostrialy noho ny fahanginany miasa raha ampitahaina amin'ny kodiarana mafy kokoa toy ny vy na vy vy. Ireo kodiarana PU ho mpitroka hatairana ary manampy amin'ny fandosirana. Izy io koa dia mifoka vongan-tany avy amin'ny tany tsy mitovy. Ny fampiasana kodiarana PU fa tsy vy dia afaka mampihena be ny haavon'ny tabataba mba hiarovana ny fandrenesana ny mpiasao.
Kodiarana PU fitsipika amin'ny fampiharana izay manakiana mafy ny gorodona. Ireo kodiarana PU dia hivily lalana ary hamorona dian-tongotra lehibe kokoa noho ny fitaovana kodiarana mafy kokoa, toy ny nylon. Ity velaran-tany midadasika kokoa ity dia manampy amin'ny fampihenana ny fifantohan-tsaina amin'ny gorodona ary hitazomana azy ireo ho tsara endrika mandritra ny fotoana lava kokoa. Ho an'ireo zavamaniry izay lafo ny gorodiny ary manakiana ny asanao, dia ny kodiarana PU no mety aminao.
Tombontsoa hafa ho an'ny Kodiarana PUamin'ny fampiharana indostrialy dia ny coefficient ny tsy fitovizan'ny fitaovana. Ity sanda ity dia mamaritra ny tahan'ny herin'ny fifandirana eo amin'ny vatana roa sy ny hery manery azy ireo. Ny faritra somary lalindalina kokoa dia mazàna manana sanda mahomby kokoa ary ny faritra malama kosa dia ambany kokoa noho ny fikororohana vokariny rehefa miforitra.
Kodiarana PU mazàna ho fitaovana grippy, noho izany ny coefficient ambonimbony kokoa amin'ny fikororohana dia afaka manampy amin'ny fitazonana ireo sarety tarihiny tsy hiposaka. Ny fiheverana manan-danja toy ny fivezivezena dia mety ho olana amin'ireo fitaovana kodiarana mafy kokoa.
Kodiarana PU koa manome traction tsara hamily kodiarana ary manampy amin'ny fampihenana ny habetsaky ny enta-mavesatra amin'ny kodiarana mba hahatratrarana ny hery faniriana tiana.
Marika Fiara fitaovana Ruiyi
Anarana Fiara fitaovana any ivelany
Firafitry ny fitaovana Lamba Oxford + fantsom-by
Size 82 * 56 * 6CM
fomba Fomba amerikanina
Tandle Fitsaboana famafazana
fonosana Kitapo ivelany tokana
Kodiarana amin'ny fiara sasany
Tanana tsara, tsy mora solafaka, fampisehoana tsy mahazaka akanjo, fampisehoana aina
Teo aloha: Fefy Pet
Manaraka: Kodiarana fingotra
Sina PU Foam Wheel, Kamio mixer, Caster Wheel, China Concrete Mixer, Kodiarana PU, China PU Wheel,